'EPEEN' के मतलब छ?
इन्टरनेट र नेटवर्क आधारभूत
'एपेन' के हो? Epeen मतलब के गर्छ?
by पल गिल
प्रश्न: 'Epeen' के हो? Epeen मतलब के गर्छ?
उत्तर: "एस्पेन" (ई-पीन्स; एस्पेन) एक कठोर शब्द हो जुन कसैको मुद्रास्फीति अहंक्वित गर्न को लागी "इलेक्ट्रोनिक पेनिस" को रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो ती अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूलाई अपमान गर्ने अपमान गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन आफैले अरूलाई भन्दा बढी भन्दा बढी मान्दछन्।
फोरम र एमएमओ खेलहरू जस्ता अनलाइन समुदायहरूको स्थितिमा, सधैं उत्कृष्टता परिसरहरूको साथ अहंकार हुनेछ। यी अहंकारहरू आफ्नो अत्यधिक बेरोजगारी, अरूलाई नियमित रूपमा घृणित टिप्पणीहरूको लागि चिनिन्छन्, र समग्र घर्षण प्रकृति। कोही पनि अहंकारहरू मन पराउँदैनन्, त्यसैले यो आभासीहरूलाई अरूको भन्दा ठूलो हुनु भनेको 'उनीहरूको' इलेक्ट्रॉनिक पेनिज 'भन्ने उल्लेख गरेर मानिसहरूको भर्चुअल समुदायहरूमा सामान्य छ। वास्तवमा, कसैलाई तपाईंको निपुणता को लागी कसैले कसैलाई अपमान गरेको छ।
Epeen उपयोग को उदाहरणहरु:
क्या तपाईं उस केटा को epeen को आकार मा विश्वास गर्न सक्छन्? मलाई धेरै चिन्ता भएको छु ... म उनको बेवकूफ ब्रेकिंग को कुनै संभाल नहीं सका।
चुरोट, मान्छे! कुनै पनि तपाईंको epen को बारे मा परवाह छैन, यसैले तपाईं अपमानित मा किन कम र एक वयस्क जस्तै यहाँ योगदान शुरू गर्न छैन?
तपाईंको सबै बिचमा के कुरा छ? के तपाईं आफ्नो epen देखाउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ? यदि त्यसो भए, कृपया रोक्नुहोस्, किनभने यो साँच्चै साँच्चिकै उबाईरहेको छ।
संवेदनात्मक प्रतिक्रियाहरु संग धेरै! हो, तपाईं एक सुन्दर खेलाडी हुनुहुन्छ, के तपाईं सुन्न चाहनुहुन्छ के हो? के हामी अहिले सार्न सक्छौं?
Epeen उपयोग को थप उदाहरणहरु:
धेरै बढ्नुहुन्छ? तपाइँको epen भर्खरै स्ट्रोक गरिएको छैन?
म व्यापार कुराकानी देख्दैछु र यो धेरै मनोरञ्जन छ। बोस्टनबाट दुई नर्सहरू हिलर्सको रूपमा PVP कसरी गर्ने भन्ने कुराले भरिएको छ। 12 जना बालबालिकाहरूसँग मुँहासे समस्या हुनुपर्दछ।
म शक्तिशाली हूँ, मेरो epen हेर्नुहोस्! म सबैभन्दा ठूलो ज्याक हुँ जुन यस खेललाई कहिल्यै अनुग्रह गर्दछु!
म PVP सर्भरहरूमा क्यारेक्टरलाई तहमा घृणा गर्दछु। धेरै केटाकेटीहरूले एपन्सको साथ राम्रो महसुस गर्न आवश्यक छ, यसले मलाई 45 मिनेटमा एक बेवकूफ क्वेस्टमा लिनको लागी लिन्छ किनकि यी रिडिर्डहरूले मेरो शरीरको शिविर बनाउँदछन्।
इप्पल अभिव्यक्ति, जस्तै इन्टरनेटको धेरै सांस्कृतिक उत्सुकताहरू, आधुनिक अंग्रेजी संचारको भाग हो।
थप इन्टरनेट संक्षिप्त विवरणहरू र तीर्थ अभिव्यक्तिहरू पढ्नुहोस् ...
About.com मा लोकप्रिय लेख:
इन्टरनेट मेम के हो?
किन तपाईंले कहिल्यै मेम बनाउनुहुनेछ?
इन्टरनेट मेम कसरी बनाउने?
हैकर के हो ?
सबै समयका सर्वश्रेष्ठ ह्याकर चलचित्रहरू
तपाईंले आफूलाई सुरक्षित राख्न VPN प्रयोग गर्नुपर्छ
सबैभन्दा नशेको लक्षण वेबसाइट
TLDR के हो?
All About.com गाइडहरू इन्टरनेट सर्तहरू र एन्टिमाइमेन्टहरूमा
'आरटीटीएम' के हो? RTFM ले के गर्छ?
के छ '? के मतलब छ?
यहाँ के 'EPEEN' मतलब छ
इन्टरनेट टोलहरू: उनीहरूले तपाईंलाई कसरी प्रभाव पार्छन् र तिनीहरूसँग व्यवहार गर्ने सुझावहरू
के। URL मा एक अर्थ छ
एक Cyberlocker के हो? किन विवादास्पद छ?
सिफारिस गरिएको मानक 232 (आरएस-232) पोर्ट र केबल्स
जिप फाईलहरू: तिनीहरूलाई सफ्टवेयर सफ्टवेयरसँग अनबज गर्नुहोस्
कम्प्युटरको प्रोटोकॉल के हो?
क्लाउड कम्प्युटिंग के हो?
म कसरी खेल्छु। फाइलहरू?
टोकन रङले के गर्छ?
मेगाबिट (एमबी) के हो? के यो मेगाबाइट (एमबी) को रूपमा हो?
सैमसंग HT-E6730W ब्लू-रे गृह थियेटर प्रणाली - फोटोहरू
वर्ड 2010 मा फुटनोट कसरी घुसाउनुहोस्
तपाईंको DSLR मा प्रोग्राम मोड प्रयोग गर्दै
IBUYPOWER बटालियन 101 W230SD
शीर्ष आईफोन चलिरहेका अनुप्रयोगहरू
सुपर जनजाति समीक्षा
दास बूम: थोनसेट र भान्डर कर्बिस बीटी अध्यक्षको समीक्षा
हार्ममैन वार्डन AVR2600 होम थियेटर रिसीभरको समीक्षा
एक ब्लग छनौट गर्न5युक्तिहरू विषय
डेबियन वेबसाइटको बहस नगरी डेबियन प्राप्त गर्न4तरिका
एफटीपी - फाइल स्थानान्तरण प्रोटोकल
एन्ड्रोइडको लागि उत्तम पकाउनुहोस् र भोजन योजना एप्स
10 मा एक विशेषज्ञ बाट अनुसन्धान सुझाव
एन्ड्रोइडमा अडियोबक्सहरू कसरी सुन्नुहोस्
के मेरो MP3 प्लेयर एप्पलको iTunes स्टोरको साथ काम गर्दछ?
एलजी विश्वको सबैभन्दा ठूलो OLED स्क्रिन को खुलासा गर्दछ
सोनी STR-DH830 होम थिएटर रिसीभर - उत्पादन समीक्षा
माइक्रोसफ्ट सर्फेस3बनाएर सतह प्रोस्टर 3
कसरी बचत गर्नुहोस् पासवर्डहरू बचत गर्नुहोस् पासवर्डको लागि क्रोममा iPad को लागि
क्यान्सर माइक्रोफोन र गतिशील माइक्रोफोन: के फरक छ?
कुन तथ्याङ्क तपाईंले पोकमोन जानुमा ट्रयाक राख्नुहुन्छ?
आईपीएस प्रदर्शन पछि टेक्नोलोजी को शुरुवात मार्गदर्शिका